ဤအကြောင်းကြောင့် iFixit ၏အဆိုအရ Galaxy Fold ၏ဖန်သားပြင်များကျိုးပဲ့နေသည် Androidsis
ဒီအကြောင်းကြောင့် iFixit ရဲ့အဆိုအရ Galaxy Fold ရဲ့ဖန်သားပြင်တွေပျက်နေပြီ
အသစ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းယူနစ်အချို့အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် display များကြောင်းအစီရင်ခံစာများအားဖြင့်မကြာသေးမီကမီဒီယာအံ့သြသွားတယ် က galaxy ခေါက် Samsung ၏ အတော်လေးအလွယ်တကူချိုးဖောက်.
ဤဖြစ်စဉ်များက Samsung ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် Fold ကိုလွှတ်ပေးရေးကိုရွှေ့ဆိုင်းပါ။ Galaxy Fold ၏အောင်မြင်မှုမရခဲ့သည့်အတွက်ပွဲ ဦး ထွက်တွင်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောဖုန်းအဖြစ်ငွေတောင်းခံထားရသောပစ္စည်းသည်ဘာကြောင့်မှားယွင်းနေရသလဲ။ အထူးသဖြင့်၎င်းတွင်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ၀ န်းကျင် ၀ ယ်ယူထားသည်။ ဆက်စပ်မှုမှာ iFixit ကပျက်စီးသွားသောမျက်နှာပြင်များ၏အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
ဘလော့ဂ်အသစ်တစ်ခုတွင် Kevin Purdy နှင့် iFixit အဖွဲ့မှအခြားအဖွဲ့ဝင်များသည် Samsung Galaxy Fold ကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများအားစိတ်ထိခိုက်စေသည့်သိသည့်ပြissuesနာများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဒီအဖွဲ့ကဒီ terminal ထဲရှိတူညီသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် AMOLED ပြားများကိုသုံးသောအတွင်းပိုင်းကိရိယာများကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ဆန်းစစ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (ကြည့်ပါ⇒ Galaxy Fold နှင့် Huawei Mate X - ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူသောကွဲပြားသောသဘောတရားနှစ်ခုရှိသည်)
ကွဲကွဲ Galaxy Fold မျက်နှာပြင်
တိုတိုမှာ, post ကိုကြောင်းထောက်ပြသည် OLED မျက်နှာပြင်သည် Galaxy Fold ၏ပြatနာများ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်၎င်းတွင်ထိပ်ရှိ Gorilla Glass ကဲ့သို့သောအကာအကွယ်အလွှာမရှိပါ။ OLED မျက်နှာပြင်များသည်အလွန်ပျက်စီးလွယ်သည်ဟုဆိုကြသည်၊ ထို့ကြောင့်အသေးငယ်ဆုံးဖုန်မှုန့်အမှုန်များပင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ခြံအတွင်း၌ဖုန်မှုန့်များသည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောဒေသများသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်မသိသော: AMOLED ပြားများသည် OLED နည်းပညာကိုအခြေခံထားတယ်။ သူတို့မှာပုံမှန် LCD ဖန်သားပြင်များထက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ သူတို့ဟာ backlighting မလုပ်ဘဲအလုပ်လုပ်ကြတာ၊ ပိုပြီးထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးတောက်ပသောအရောင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် OLED ရှိအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်သည်ဖုန်းအများစုနှင့်အတူတင်ပို့သည့်ပါးလွှာ။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောရေစိုခံရုပ်ရှင်နှင့်ဆင်တူမည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် OLED မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေပြီး၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် အတော်လေးအကာအကွယ်မဲ့ panel ၏ဤအမျိုးအစားအပေါ်ပြင်းထန်သောဖိအားအန္တရာယ်ရှိသည်.
Galaxy Fold မစတင်ခင်က Samsung သည်စက်ပစ္စည်းအတွက်လူသိများသောစက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစက်ရုပ်တွင်စက်ရုပ်ဖိုလ်ဒါများသည်ခေါက်ထားသည့်ယန္တရားကိုအမျိုးမျိုးသောခေါက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ iFixit သည်စမ်းသပ်မှုများသည်အလွန်များလွန်းသည်ဟုလူအများထင်မြင်ယူဆကြပြီး၊
နောက်ဆုံးအနေနှင့် iFixit အဖွဲ့ကဖော်ပြခဲ့သည်မှာခေါက်ထားသည့်မျက်နှာပြင်၏အလယ်တွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်တွန့်လိုင်းများမရှိခြင်းသည်၎င်းကိုအဆက်မပြတ်ခေါက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး OLED panel ကိုပိုမိုဖိစီးစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဒီအကြောင်းကြောင့် iFixit ရဲ့အဆိုအရ Galaxy Fold ရဲ့ဖန်သားပြင်တွေပျက်နေပြီ
Avengers တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ Oppo F11 Pro Avengers Edition နှင့်အတူဖြစ်သည်